သင့်လက်တွဲဖော်အမျိုးသမီးက သင့်ကို စိတ်ကုန်ပြီး တခြားတယောက်ထားတော့မယ်ဆိုရင် သိနိုင်တဲ့အပြုအမူများ – CantWait2Say
သင့်လက်တွဲဖော်အမျိုးသမီးက သင့်ကို စိတ်ကုန်ပြီး တခြားတယောက်ထားတော့မယ်ဆိုရင် သိနိုင်တဲ့အပြုအမူများ
သငျ့လကျတှဲဖျောအမြိုးသမီးက သငျ့ကို စိတျကုနျပွီး တခွားတယောကျထားတော့မယျဆိုရငျ သိနိုငျတဲ့အပွုအမူမြား
အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ကိုယျ့ခဈြသူနဲ့ ကိုယျ့ အိမျထောငျဖကျနဲ့ လမျးခှဲရမှုတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ဒီလို ဖွဈရတာဟာ တယောကျနဲ့ တယောကျ သဘောထားမတူကွတော့တာဖွဈနိုငျသလို တယောကျက စိတျပကျြသှားလို့ အသဈရှာခငျြလို့ သငျ့ရဲ့ အားနညျးခကျြကို လကျမခံပေးခငျြလို့ ဖွဈပါတယျ။ကိုယျ့ လကျတှဲဖျော အမြိုးသမီးက အသဈထားဖို့ ခွလှေမျးစပွီး လုပျတတျတဲ့ အပွုအမှုတှကေို အနီးစပျဆုံး ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
သငျ့ကို အရငျကထကျ ဂရုစိုကျတဲ့ ပုံစံမြိုး လုပျလာတာ သူရဲ့ ပငျကိုယျသဘောမဟုတျပဲ သငျ့ကို အလေးအနကျထားဟနျ ပွနတေဲ့အခါမှာ သငျ့အနနေဲ့ ပွောငျးလဲသှားတဲ့ စရိုကျအပျေါ လလေ့ာသငျ့ပါတယျ။ကိုယျက ထိနျးကွောငျးမှုကောငျးလို့ ပွောငျးလဲတာလဲဖွဈနိုငျသလို ကိုယျ့ကို ထိနျးကြောငျးဖို့ ပွောငျးလဲသှားတာလဲ ဖွဈနိုငျပါတယျ။အမြိုးသားတျောတျောမြားမြားကတော့ ဒီပုံစံကို သိလို့ အိမျကို မထငျမှတျတဲ့အခြိနျပွနျသှားရငျ surprise ဖွဈစရာကတော့ ယောကျြားတဈယောကျနဲ့ အတူရှိနတောကို တှတေ့ယျလို့ စဈတမျးအရ ဖျောပွထားပါတယျ။
နောကျတခုကတော့ သငျဟာ အပေါငျးအသျငးတှနေဲ့ အလညျကွူးပွီး ပွနျမလာတာမြိုးကိုလဲ စိတျမပူတော့ပါဘူး။သျငပွောတဲ့ သဝနျတိုစရာ စကားတှကေိုလညျး ဂရုမစိုကျတော့ပါဘူး။ဒါဆိုလဲ ကိုယျ့လကျတှဲဖျောရဲ့ အခွအေနကေို ဂရုစိုကျသငျ့ပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ လကျတှဲဖျောဟာ သူ့ရဲ့ဖုနျးကို ပျေါပျေါထငျထငျ မထားတော့ဘူး၊သငျ့ကို မပွတော့ဘူးဆိုရငျလညျး သငျ့အနေနဲ့ သံသယဝငျသငျ့ပါတယျ။သူ့မှာ မဖောကျပွနျသညျ့တိုငျ သငျ့မသိစခေငျြတဲ့ အကွောငျးတခု ရှိနပွေီဖွဈပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ အထိအတှကေို့ သာယာဟနျမပွတော့တာ သငျ့ရဲ့ နူးညံ့ဖှယျစကားကိုတောငျ လကျတှဲဖျောက နားဝငျခါးသလို လုပျနတောမြိုးဆို သူမကို လလေ့ာသငျ့ပါတယျ။တခါတလမှော လငျမယားကိစ်စတောငျ မရှိအောငျ သူမဘကျက ငွငျးဆနျမှုရှိလာရငျ ကနျြးမာရေးကွောငျ့လား စိတျခံစားမှုကွောငျ့လား အသဈတှတေ့ာလား ကှဲပွားအောငျ လလေ့ာသငျ့ပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ လကျတှဲဖျောဟာ သူ့ပုံစံမဟုတျတဲ့ အဝတျအစားအလနျးတှနေဲ့ အတှငျးခံ အလှတှေ အလနျးတှေ ဝယျနပွေီဆို သတိထားပါ။သငျနဲ့ ရှိခြိနျမှာ ဝတျတာမဟုတျပဲ အပွငျထှကျဖို့ ဝတျတာဆို အတိုငျးအတာတခုအထိ စောငကျ့ကွညျ့ဖို့ လိုအပျလာပွီဖွဈပါတယျ။
ဘာမဟုတျတဲ့ ကိစ်စတောငျ သငျ့အပျေါသညျးမခံနိုငျဖွဈလာတာ၊သငျ့ကို အကွောငျးရှာပွီး မွညျတှနျတောကျတီးလာတဲ့အခါ သူမမှာ ယောကျြားလေး အသိအသဈတယောကျွ ရ မရဆိုတာ သိအောငျ စုံစမျးပါ။မိနျးမပဲ ဖွဈဖွဈ ယောကျြားပဲ ဖွဈဖွဈ အသဈတှတေဲ့အခါ အဟောငျးရဲ့ အပွဈကို လကျညှိုးထိုးဖျောတတျပွီး စိတျတိုငျးမကြ ဖွဈလာတာရှိပါတယျ။
သငျသိထားတဲ့ အရာတှကေို မေးရငျတောငျ ဝလေ့ညျကွောငျပတျပွနျအဖွပေေးတာ သငျ့ကို ပွနျမဲတာမြိုးလုပျနရေငျ သငျ့အနနေဲ့ သူ့ကို အရငျကထကျ ပိုဂရုစိုကျပွီး စောငျ့ကွညျ့ဖို့ လိုလာပါပွီ။အကွောငျးကတော့ လူတိုငျးက လကျတှမွေ့ငျရငျတောငျ အခြို့အရာကို ဗွောငျလိမျခငျြတာဖွဈပွီး လကျတှမေ့ဟုတျခငျမှာတော့ သူ့အမှား ကိုယျ့အမှားလုပျကာ အခွအေနကေို ပွောငျးပွနျေဲပာငျးလိုကျနိုငျပါတယျ။
သူမရဲ့ ပငျကိုယျ ရနံ့ထကျ အမှေးအကွိုငျတှေ ပွောငျးလဲသုံးစှဲတာ ထှကျသမြှ အလှကုနျတှေ ဝယျပွီး ပွငျဆငျတာ ဆံပငျကို တလထဲ ဆိုငျမှာ ခဏ ခဏသှားပွငျနတောမြိုးဆို သူ့ကို စောငျ့ကွညျ့သငျ့ပါတယျ။အရငျထဲက ဒီပုံစံပဲဆို ပွဿနာမရှိပါဘူး။
သငျ့နဲ့ တဖွေးဖွေးဝေးကှာသှားအောငျ စနဈတကြ ကွံဆောငျပွီး သငျ့မလိုခငျြပုံစံတှပေဲ ရှေးခယျြလုပျဆောငျနပွေီ သတိထားပါ။သူဟာ သငျ့ဘဝထဲကနေ တဖွေးဖွေးထှကျခှာသှားဖိုက ကွံစညျနပေါပွီ။ဒါမှမဟုတျ သူ့ဘဝထဲကနေ သငျ့ကို အဝေးဆုံးမောငျထုတျနပေါပွီ။
အရိုးသားဆုံးသစ္စာရှိတဲ့relationshipတစ်ခုဖြစ်ဖို့ အပြန်အလှန်လိုက်နာသင့်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေ သက်တမ်းရှည်ကြာခိုင်မာတဲ့ relationshipတစ်ခုဖြစ်ဖို့ အခြေခံလိုအပ်ချက်က ယုံကြည်မှုပါ။ရိုးသားမှုနဲ့အပြန်အလှန်ယုံကြည်နားလည်မှုဆိုတာ ချစ်သက်တမ်းဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်မသွားစေမယ့် အဓိကလျို့ဝှက်ချက်ပါ။ဆိုတော့ ဒီတစ်ခါမှာ သင့်ရဲ့ဘဝလက်တွဲဖော်နဲ့ လှပတဲ့relationshipတစ်ခုဖြစ်ဖို့ အပြန်အလှန်လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်အချို့ကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ။ 1.သင့်ကိုယ်သင်မလိမ်ပါနှင့်။ သင့်ကိုယ်သင် မလိမ်ပါနှင့်။မလှည့်စားပါနှင့်။သင်နှင့်ပတ်သက်ရမည့်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ကိုရှင်းရှင်းထားပါ။သင့်ရဲ့ရှေ့တစ်လျှောက်လုံးအတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်လို့ မပတ်သက်ခင်ကတည်းက သင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ရင်းအသံကို နားထောင်ပါ။ 2.သင့်ရဲ့relationshipအတွက် အချိန်ပေးပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံး …
ညီအစ်ကိုမောင်နှမရှိတာက ကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ ပုံ ၂၀
ညီကိုမောင်နှမရှိတာက ကောင်းတယ်လို့ပြတဲ့ပုံ 20 ခု မောင်နှမ ရှိတဲ့သူတွေကတော့ တခါတလေမှာရန်ဖြစ်ကြပေမဲ့ ဘယ်လောက်နွေးထွေးလဲ ဆိုတာကိုသိကြမှာပါ။ ဘယ်အရာက ကိုယ့်သွေးချင်းတော်စပ်တဲ့သူတွေထက် ပိုကောင်းနိုင်အုံးမှာလဲ? နွေးထွေးတယ်! ဘယ်အရာက မောင်နှမရှိတာထက် ပိုကောင်းနိုင်သေးလဲ…. Unicode ညီကိုမောငျနှမရှိတာက ကောငျးတယျလို့ပွတဲ့ပုံ 20 ခု မောငျနှမ ရှိတဲ့သူတှကေတော့ တခါတလမှောရနျဖွဈကွပမေဲ့ ဘယျလောကျနှေးထှေးလဲ …
သင့်ကိုကြိတ်ကြိုက်နေတယ်လို့ပြတဲ့လက္ခဏာ၆မျိုး 1 ပထမလူမျိုးကတော့သူ့တို့ကြိုက်တဲ့သူဆီချဉ်းကပ်တယ်။သူတို့ကသူတို့သဘောကျတဲ့သူကိုတွေ့နိုင်တဲ့နေရာမှာသွားလေ့ရှိတယ်။အခွင့်အရေးတိုင်းကိုလည်းယူတတ်တယ်။ဥပမာအားဖြင့်သူကြိုက်တဲ့သူကိုဝင်တိုက်ပြီးတောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခွင့်အရေးလိုမျိုးပေါ့။ ဒုတိယလူမျိုးကတော့သူကြိုက်တဲ့သူကိုရှောင်တတ်တယ်။ခက်ထန်တဲ့စကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုပိတ်ပင်လေ့ရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကသူတို့ကြိုက်တဲ့သူနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့ထင်ပြီးရှောင်နေတတ်ကြတယ်။ အကယ်လို့တစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ကိုရှောင်တာဒါမှမဟုတ်သင့်ဆီပုံမှန်ထက်ချဉ်းကပ်လာပြီဆိုရင်အကြောင်းအရင်းတွေရှိတယ်။ ကိုယ်သဘောကျတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုအမြဲတမ်းမျက်စိမပျက်ဂရုစိုက်ချင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အသေးအဖွဲကိစ္စတိုင်းဟာသူ့အတွက်အရေးကြီးတယ်။အကယ်လို့သင်ကတစ်ခုခုနဲ့ခံစားနေရတယ်ဆိုရင်သူကဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲလို့သိချင်တယ်။အနည်းဆုံးကတော့ဘာမှမသိတာထက်စာရင်ကောင်းတယ်လေ။ ဒါပေမဲ့အကြည့်တွေကိုအဖမ်းခံရပြီဆိုရင်ဒုတိယတစ်မျိုးဖြစ်လာရော။အကြည့်တွေကှိုရှောင်တယ်။ဝေးဝေးကိုသွားတယ်။ 2.စကားပြောတဲ့ပုံစံနှစ်မျိုးရှိတယ် လူတစ်ယောက်ကသူ့စကားပြောတဲ့ပုံစံတွေကိုကဗျာဆရာလိုလိုအတွေးအခေါ်ပညာရှင်လိုလိုလူတစ်ယောက်နဲ့ပြောဖို့အတွက်ပြောင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကလူတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာသူတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးပေမဲ့ပိုလွယ်ကူစေတယ်။ကံကောင်းမယ်ဆိုရင်လူရွှင်တော်လိုဖြစ်သွားမှာပေါ့။ 3.တော်ပြီးစဉ်းစာဆင်ခြင်တတ်တဲ့သူတွေကကြတော့လည်းလူအတွေလိုဖြစ်ပြန်ရော။အဲ့ဒါကပြောရမယ်ဆိုရင်တခြားတစ်ယောက်ကိုသဘောကျအောင်ကြိုးစားပြီးလုပ်နေလို့ဖြစ်တယ်။ 4.သူတို့ကြိုက်ရတဲ့သူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောလေ့ရှိပြီးသူများကိုလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းလိုက်ပြောအောင်လုပ်လေ့ရှိတယ်။သူတို့မှာလေးနက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးပြီးရင်တောင်မှတခြားသူဆီသွားပြီးသူ့နဲ့တူတဲ့နာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့သွားပြီးအဲ့အကြောင်းသွားပြာလေ့ရှိတယ်။ 5.စိတ်ဝင်စားစွာပဲလူတွေကကိုယ်ကြိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပဲပြောလေ့ရှိတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကစကားပြောနေချိန်မှာသူတို့ရဲ့တူတဲ့အချက်လေးတွေကိုဆွဲထုတ်လေ့ရှိတယ်။ “ဒီ Games of Throne ကားကိုကြည့်တာကကမေရီနဲ့ကျွန်တော်ပဲရှိတယ်။” 6.ကြိုက်တဲ့သူကိုတွေ့ပြီဆိုရင်အပြုံးကိုမထိန်းနိုင်တော့ဘူး။အကယ်လို့အရမ်းကြိုက်နေပြီဆိုရင်မျက်ခုံးတစ်ဖက်ကိုမသိပဲနဲ့ပင့်တင်ပြီးပြုံးနေတတ်တယ်။ ကုမ္ပဏီမှာတစ်ယောက်ယောက်ကဟာသပြောနေလို့ရယ်နေတဲ့အချိန်သူကကြည့်လာရင်ပိုတောင်သဘောကျသေးတယ်။ 7. အချစ်ရှိနေတဲ့သူကသူကြိုက်တဲ့သူနဲ့တူတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုလိုက်ဝင်စားတယ်။အရင်တုန်းကမလုပ်ဖူးတဲ့စာအုပ်ဖတ်တာအားကစားလုပ်တာတို့ပေါ့။ Unicode သငျ့ကိုကွိတျကွိုကျနတေယျလို့ပွတဲ့လက်ခဏာ၆မြိုး 1 …